ဒီချုပ်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံတွင်တင်သွင်းသော ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပါ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၃- အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံတွင် တင်သွင်း သည့် နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံ စာပါ ရှေ့ဆက် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံ ပထမနေ့အခမ်း အနားကို ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MCC ခန်းမတွင် ကျင်းခဲ့ပြီး ဗဟိုအလုပ် မှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကို ပါတီ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီး ချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က တင် သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အထက်ပါအချက် လည်း ပါဝင်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာ၏ အပိုင်း (၃) တွင် ပါတီရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် ငါးရပ်ပါဝင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ် (၁) တွင် တရား ဥပဒေစိုး မိုးရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀တိုးတက် မြင့်မားရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အရေးနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဟူသည့် ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်သုံးရပ် ကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည် ဖော် ဆောင် ရွက်ရေး ဟူ၍ပါရှိသည်။
ယင်းအပြင် ၂၀၁၈ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး၊ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး၊ ခိုင်မာအားကောင်းသော အဖွဲ့ချုပ်ကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ရေး၊ အဖွဲ့ချုပ် သည် အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းများ ကို ၀န်းရံရေးတို့သည်လည်း ရှေ့ဆက် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်သည်။
ယင်းနောက် စည်းရုံးရေးအစီရင် ခံစာအား ပါတီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က တင်သွင်း ခဲ့ပြီး ဗဟိုအလုပ် မှုဆောင်အတွင်းရေး မှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးÓဏ်ဝင်းက ညီလာခံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင် ရွေး ချယ်ပုံအဆင့်ဆင့် အကြောင်းအား ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ညီလာခံပထမနေ့တွင် ပြည်နယ် နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှ တက် ရောက်လာသူများမှ ဗဟိုကော်မတီဝင် အဖြစ် ရွေးကောက်ခံ မည့် သူများကို အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဗဟို ကော်မတီဝင် များ ရွေး ချယ် တင်မြှောက် ခြင်းလုပ် ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပါတီ ညီလာ ခံ ဒုတိယနေ့ကို ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပ မည် ဖြစ်သည်။
ဂျော်ဂျင်ဟို ၊ ဆန်ဒရို ၊ ဒန်နီရို့စ် ၊ ဘယ်လာရင်တို့အား ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် မန်ယူ ပေါင်သန်း ၂??